Tag: agụ | Martech Zone
Saturday, July 12, 2014 Douglas Karr
Aha nke ihe omuma ihe omuma a bu n'ezie usoro nzuzo maka uzo zuru oke. M hụrụ n'anya na infographic ma m na-a na-akwado nke aha… mbụ, Ekwetaghị m na e nwere usoro. Nke ọzọ, ekwetaghị m na enwere òkè zuru oke. Ekwenyere m na e nwere ọtụtụ ihe na ihe ndị na-eduga n'ịdị oke ọdịnaya. Offọdụ n'ime ya bụ sọọsọ nkịtị dị ka ọ na-aga n'ihu aka nri
Thursday, July 17, 2008 Friday, May 3, 2013 Douglas Karr
Imirikiti ndị mmadụ anaghị agụ ebe nrụọrụ weebụ n'echiche. Ndị mmadụ na-enyocha ihe ederede site na elu ruo na ala wee jide isiokwu, mgbọ, ihe oyiyi, isiokwu na ahịrịokwu ha na-ele anya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite ụzọ ndị na - agụ akwụkwọ si eri ọdịnaya gị, enwere ụzọ iji bulite nhazi gị. Tinye ederede gbara ọchịchịrị na ndabere ọcha. Softdị agba ndị ọzọ dị nro nwere ike ịrụ ọrụ, mana ọdịiche bụ isi, yana font na-agba ọchịchịrị karịa nzụlite. Gbalịa ka ukwuu,